Nezvedu - RISIN ENERGY CO., LIMITED
RISIN ENERGY CO., LIMITED yakavambwa muna 2010 uye iri muDongguan City. Mushure memakore anopfuura gumi ekuenderera mberi nekusimudzira, RISIN ENERGY yave inotungamira uye yakavimbika chigadzirwa cheSolar PV zvigadzirwa.
RISIN ENERGY uve nesimba rekupa Solar PV Cable, Solar PV Connector, DC Dunhu Bhiriji, Solar Charger Controller, Anderson Power Connector uye akasiyana-siyana e-photovoltaic system accessories.
RISIN ENERGY inotungamirwa kune zvinodikanwa zvevatengi zvine zvikwata zveR & D zvakasimba, inotarisa pakupa Best Quality uye Services kuburikidza nekuenderera mberi kugadzirisa zvigadzirwa zvezuva, kunyatsotungamira kwekutonga kwemhando uye mushure mekutengesa.
CHOKWADI SQUARE METER
SALES RINOGONESA USD
Kana zuva rakwira, zuva idzva riri kutanga.
Simba Nyowani, Nyowani kurarama.
RISIN ENERGY vane zvinopfuura 10+ Makore anoshanda chiitiko muSolar PV Bhizinesi neKutengesa Kunze.
RISIN ENERGY's Solar PV Cable iri kuvimba neR & D timu yakasimba, mitsara yekugadzira yakakwana uye zvekushandisa zvekuyesa (Senge Muchina wedhinda weuko etc.), ese maitiro uye zvigadzirwa zvinofanirwa kuongororwa neQC department pamberi pekutumirwa.
RISIN ENERGY's Solar Cable yakapa mubayiro TUV 2PfG 1169 1000VDC uye TUV EN50618 H1Z2Z2-K 1500VDC Certification ne 25years waranti uye nehupenyu hwekushanda.
RISIN ENERGY's MC4 Solar Connector vane yemazuva ano manejimendi manejimendi uye otomatiki michina kugadzirwa process.We have Die Casting Pin Machine, Plastion Injection Machine, Assembly Positioning Shrapnel process, Auto Assembly O ring & Connector yedzimba machince, Resistance test process, Pull test machince, Waterproof test process, Well insulation test process uye Yakasimba purasitiki nemabhokisi etc.Mese maitiro uye ma solar plugins anofanira kuongororwa neQC.
RISIN ENERGY's Solar DC Connector vane mvumo ye1000V TUV EN50521: 2008 na1500V EN62852: zvitupa zvegore raJoshua ne 25years waranti uye nehupenyu hwekushanda.
"Yako tambo yemagetsi yakanaka kwazvo. Mr. Michael akanaka. Tinofarira kushanda naye, anobatsira kwazvo uye akadzikama. Ini ndinoshuva ndokuraira itsva solar cable 6mm uye ndapota inotevera nguva haishandure kutaura. Tarisira kuona hukama hwakawanda mukati "
"Aya maPV Makabheji uye maMCD4 maunganidziro akakurumidza kusvika uye akange ari nyore kwazvo kupinza mune yangu solar setup. Ini ndichanyatso kuramba ndakatarira kuna Risin Energy yemberi yangu yeSolar inodiwa."
"Michael, sekugara kwaunoita kwevatengi kwakanaka. You guys have been great uye kana isu tava new command muchava foni yedu yekutanga."
"Vanobatana vechikadzi veMM4 vanobatanidza pamwe neSolar Cable ndiyo yaingove tiketi yekubhururutsa mhepo yangu yebrbrid nemuchina wekutongesa simba pakubata kabhini nguva ino yechando. Tinotenda nekupa kwese kwese zvigadzirwa zvinopihwa."
"Iwe unoita nyore kuisa sola system paRV. Unhu hwakanaka, Vabatanidzi veDC zvakanaka.Ndafara zvikuru uye ndakabatikana.
"Ini handikwanise kutaura zvakakwana nezve zvigadzirwa zvako zvezuva. Ini handingavimbe nemumwe munhu weSolar zvachose. Kuuya nekukurumidza uye hakuna kumbobvira kwabuda kune imwe MC4. Maita basa panguva ino yekusavimbika ndinokutendai kune vashandi vese "kuzoshanda panguva yedenda.Sunlight inogara ichisvika mushure mekutambudzika."
"Yangu solar system yakarongedzwa neRisin energy's MC4 uye PV tambo. Hapana zvichemo izvozvi. Inoenderana nemagetsi angu epasi.Good zvigadzirwa uye basa guru kune vatengi.Thanks."